Indlela yokwakha i-backlink esemgangathweni esemgangathweni?
Kwiintsuku zethu, abanikazi bewebhusayithi banyanzelekile ukuba balwe nezikhundla eziphezulu kwiphepha lekhasi lokukhangela njengepesenti yokhuphiswano kakhulu. Ukuze kubonakale kwiindawo ezininzi ezinxulumene ne-niche, kufuneka udale umkhankaso wokwenza uphuculo lokuphumelela kwaye udale iphrofayili yoqhagamshelwano oluphezulu. Ukususela ngeli xesha lokugqibela lokuhlaziya iGoogle, kwaba yinto enzima kakhulu yokwakha izixhumanisi kwisayithi lakho. Ngamhla, iGoogle ihlalutya ngokugqithiseleyo umgangatho wekhonkco ezingenayo, ixabisa kuphela ezo zikhokelo ezivela kwimithombo yewebhu enegunya. Yingakho bonke abakwa-webmasters abajonga phambili bafanele baqaphele ukuba bakhaphi i-backlinks ukufezekisa ukusebenza kakuhle. Kule ngqaku, siza kuxubusha iindlela ezifanelekileyo zokufumana i-backlink ephezulu kunye neemeko ezinokukunceda ukuba unyuse inani leenjongo zokungena.
Iindlela zokufumana i-backlink ephezulu
I-backlink evela kwimithombo yewebhu ehloniphekileyo
yokuqala kunye neyona nto ibaluleke kakhulu into ebangela umgangatho wezonxibelelwano ezingenayo yigunya lemithombo esuka kuyo ezo zixhumanisi. Ngokomzekelo, ukuba unobuncinane be-backlink ezininzi ezivela kwimithombo yamandla ephezulu ye-web baza kukuzisa i-juice ye-link kunye nezonxibelelwano ezininzi ezivela kwiiwebhusayithi ezisezantsi.Ingacaciswa ngokuqonda kweGoogle ngomgangatho wequlatho okanye izixhumanisi eziphumayo kwiindawo ezinjalo ezihloniphekileyo. Ngaphandle koko, izinto ezimbini ze-Google zibeka umgangatho wemithombo yewebhu - iGunya loLawulo lweGosa kunye neGunya. Ukuba umthombo web unama-metrics aphakamileyo e-PA kunye ne-DA, i-Google izakubeka phezulu kwi-SERP, ikunikezele ngakumbi. Ukuba izixhumanisi zakho ezibonakalayo zivela kule hlobo lemihlaba, ziza kuzisa i juice yekhredithi ephezulu kumaphepha akho ewebhu. Ukujonga ukuba unxibelelwano lwakho lwendawo kwiimithombo zewebhu ezigunyazisiweyo okanye akunjalo, unokusebenzisa iSetalt Web Analyzer ithuluzi.
I-Backlink ukusuka kumaphepha aphakamileyo aphezulu
I-PageRank (PR) isebenza njengesilinganiselo sokuvavanya indawo nganye kwiwebhusayithi zophando. eboniswe yiGoogle. Amasayithi aphakamileyo kwi-TOP anenani elingaphantsi kwe-9PR kwaye anelungelo lomgangatho wabasebenzisi. Ukususela ngo-2012 i-PageRank ayinamandla kakhulu njengokuba yayingaphambili, kodwa isebenza njengomgangatho wokuhlola umgangatho webhsayithi yomthombo kunye nolwazi lwayo kubasebenzisi babasebenzi kunye nabashishini. Ngokungagqibekanga, i-backlink ukusuka kwi-website ye-9 okanye ye-10PR njenge-Wikipedia, i-YouTube, i-Facebook, njalo njalo, inokuzisa i-juice ye-link ephezulu kumgangatho wakho weewebhusayithi.Nangona kunjalo, akusoloko kulula ukufumana izixhumanisi ezingenayo ukusuka kulo hlobo lwemithombo yewebhu. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezikhohlisayo onokuziphumeza (ungafunda ngazo kwinqaku elidlulileyo "Indlela yokufumana uluhlu lweDoft emva kwee-Backlinks Simahla?"). Ndiyincoma ukuba ungalichitha ixesha lakho ekuzameni ukudala iikhonkco kwiiWebhsayithi ze-PR okanye ezingabandakanyekanga kwiindawo zakho ze-PR ezisezantsi.Awunakufumana iziphumo ezilungileyo kuyo kwaye uphakamise ukulungiswa kweGoogle kwi-domain yakho.
I-Backlink ukusuka kumaphepha anemifanekiso efanayo
Ukuba awukwazi ukwakha ikhonkco zakho kwiiwebhusayithi eziphezulu ze-PR, udinga ubuncinane ukudala kwiindawo ezinxulumene niche kunye nomxholo ofanayo sihloko. Ngokomzekelo, ukuba ibhulogi yakho malunga nokuphuculwa kweenjini zokukhangela, izixhumanisi zakho kwiiblogi zokuthengisa ziya kukhangeleka ngokwemvelo. Nangona ibhulogi enegunya eliphakathi, i-backlink yakho iya kuhlolwa njengento efanelekileyo kunye nemigangatho. Kungoko ngaphambi kokuseka ubudlelwane beqabane kunye namanye amawebhusayithi okanye iiblogi, qiniseka ukuba ubuncinci babhekisela kumashishini akho Source .